Hifamotoana etsy Antanimena indray, anio maraina, ireo mpanao gazety rehetra. Anisan’ny anton’ny fihaonana sy ny dinika ny hamaritana ny dingana tokony hatao manoloana izao tolona iraisana, ho an’ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izao.
Hitondra ny heviny momba ny asa fanaovan-gazety sy ny lalàn’ny fifandraisana ny eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena Rohy, anio etsy Antaninarenina. Hiaraka amin’izy ireo hanao izany valandresaka izany ny avy amin’ny Holafitry ny mpanao gazety.
Tsiahivina fa ahitana fiarahamonina sivily, maherin’ny 50 eo ho eo ity Rohy ity.
Hisokatra tsy ho ela ny orinasa Magro sasany. Anisan’izany ny etsy Tanjombato, ho an’ny eto Antananarivo, ankoatra ny etsy Bahoririka. Hanampy ireo ny hisokafan’ny Magro any Toamasina sy Fianarantsoa ary Toliara. Tombanana ho ato anatin’ny telo volana eo ho eo izany ny fiverenan’ity orinasan’ny filoha teo aloha ity eo anivon’ny tsena.